Waxaad horey u heysatay xusuusinta dhacdada Apple ee YouTube | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan ula qabsan karnaa qabashada munaasabadaha Apple mid kasta laba ama saddex bilood. Ilaa sannadkan, shirkaddu waxay aad u jeclayd dhacdooyinka fool-ka-foolka ah ee ka socda Tiyaatarka Steve Jobs, oo ay soo buux dhaafiyeen martidiintu isla markaana ay si toos ah dunida ugu baahinayeen. Cudurka faafa ee farxadda leh ayaa wax walba beddelay.
Sannadkan dhacdooyinka shirkadda waa dalxiis, oo leh faa'iidooyinka ay tani u leedahay kuwa Cupertino. Dhibaatooyinka xagga saadka ah ee ku lug leh dhacdo fool-ka-fool ah, oo marti ka kala ah meeraha oo dhan, iyo neerfayaasha iyo halista nolosha ayaa dhammaaday. Wax walba waxaa lagu duubay fiidiyoow, iyo dhaqashada xoolaha. Marka xigta, 10-ka bishaan. Apple ayaa horay u soo dhigtay xusuusinta kanaalka YouTube-ka.
10-ka Nofeembar ee soo socota waxaan leenahay dhacdo cusub oo Apple soo bandhigaysa, oo cinwaankeedu yahay «Hal ka badan«. Maalintaas toddobada galabnimo waqtiga Isbaanishka, qaar ka mid ah shaqaalaha Cupertino (ma ogin inay tahay Tim Cook laftiisa) wuxuu gujin doonaa "ciyaar" waxaan awoodi doonnaa inaan ka soo qayb galno munaasabad cusub oo shirkadeed.
Taas macnaheedu maaha maxaa yeelay waa la duubay inaysan abuureynin rajada ugu badan ee ka dhexeysa dadka isticmaala Apple adduunka oo dhan. Marka laga reebo boqolaalka martida ah ee ka soo qeyb gali jiray munaasabadahaan tooska ah, malaayiinta kale ee daawadayaasha ah dan kama lihi hadii aan ka soo qeyb galeyno tabinta tooska ah ee ka socota Tiyaatarka Steve Jobs, ama aan daawaneyno a video si hufan loo xisaabiyay oo loo tifaftiray.
Way iska cadahay in Apple, dhacdo layaableh ay aad uga jaban tahay kana raaxo badan tahay mid nool, sidaa darteed waxaan ula qabsan karnaa inaan aragno mid labo ama sadexdii biloodba mar. Kanaalkiisa YouTube, kuwii Cupertino horeyba waa loo laalay Xusuusin laga bilaabo "Hal Wax Ka Badan", markaa ha iloobin.
Dabcan, dhacdadan ugu dambeysay ee Apple ee 2020 waxay abuureysaa rajo ka badan tii la soo dhaafay ee iPhone 12, maaddaama ay jiraan waxyaabo badan oo daadad ah oo la helay intii lagu jiray sanadka oo ku saabsan shirkadda cusub ee iPhones. Taa bedelkeeda, wax yar ayaan ka ognahay soo bandhigga soo socda. Taas oo diirada lagu saari doono Mac-yada cusub ee Silicon Apple, oo leh qalab ARM u gaar ah, iyo wax yar oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Waxaad horey u haysatay xusuusinta dhacdadii Apple "Hal Wax Ka Badan" YouTube-ka
Sida laga soo xigtay Bloomerg waxaa jiri doona ugu yaraan saddex MacBooks cusub ah Nofeembar 10
Waxaa jira hadal ku saabsan dib u qaabeynta macquulka ah ee Mac Pro